नेपाल आउन १ लाखको टिकट कसरी किनौं सरकार? :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं,भदौ १९
कोरोना महामारीपछि रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका कयौं नेपालीले रोजगारी गुमाए। कयौंको स्वभाविक रुपमा रोजगारीको सम्झौता सकियो। तर भााइरस संक्रमणको जोखिम बढेकोफ भन्दै नेपाल सरकारले हवाइ उडान गएको चैतदेखि बन्द गरिदियो।
घर आउन तयार भएका त्यस्ता नेपालीहरु विदेशमै बस्न बाध्य भए। जागिर गएपनि बेखर्ची भए उनीहरु विदेशमै बसे। सरकारले जेठ अन्तिमबाट उद्धार उडान भन्दै चार्टर्ड उडान सुरु गर्‍यो। त्यो क्रममा कुल ५१ हजार नेपाली स्वदेश फर्किए।
तर पहिले दैनिक हजार बढी फर्किने नेपालीहरु धेरै विदेशमै रहे। त्यसरी रहेका नेपालीहरुलाई फर्काउने भन्दै सरकारले केही देशमा नियमित उडान गर्न अनुमति दियो। त्यसरी अनुमति दिंदा कतिपय नेपालीहरु आउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
त्यस्ता आउननसक्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई सरकारी खर्चमै फर्काउने भन्ने कार्यविधि नबनेको पनि होइन तर त्यसको कार्यान्वयन खासै भएको छैन।
यस्तै अवस्थामा रहेका एकजना नेपालीले सेतोपाटीमा सम्पर्क गरी आफ्नो गुनासो यसरी व्यक्त गरेका छन्:
हामी दुई वर्षदेखि सयुक्त अरब इमिरेट्समा काम गरिरहेका छौ। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै पहिलेजस्तो काम पनि भएन।
यसैमा हाम्रो एकजना साथी बिरामी पनि हुनुहुन्छ। नसा सम्बन्धी समस्या छ। उहाँको अप्रेसन गर्नुपर्ने खालको समस्या छ भनेर डाक्टरले भनिसकेको छ। त्यसैले जसरी पनि घर जानैपर्ने बाध्यता छ।
घर जाने आशमा बसेका हामीलाई यसअघिका चार्टर्ड उडानले छोएन।
अस्तीदेखि उडान खुल्यो भन्ने सुनेका थियौ। जुनदिनदेखि उडान खुल्यो भन्ने हामीले सुन्यौं त्यो दिनदेखि ट्राभल एजेन्सी,नेपाली दुतावास र नेपालमा हामीले सम्पर्क गर्‍यौं।पहिलो कुरा त टिकट पाइएन।
ट्राभल एजेन्सीकोमा जाँदाखेरी पनि टिकट छैन भन्छ। बाहिरबाट मिलाइदिने शर्तमा ३५ सय युएई दिराम चाहिन्छ भन्यो। हामी हजार रुपैयाँ तलब खाने त्यसमा पनि बेखर्ची हुनै लागेका बिरामी मान्छेले त्यत्रो रुपैयाँ कसरी जम्मा गर्ने?
त्यसपछि हामीले यहाँको दुतावासमा सम्पर्क गर्‍यौं। दुतावासले युएईबाट टिकट काट्दा महंगो हुने भन्दै काठमाडौंबाटै टिकट काट्न भन्नुभयो। नेपाल एयरलाइन्सको भाडा दिराम १८/१९ सय छ भन्ने सुनेका थियौं। त्यसैले काठमाडौंका ट्राभलमा पनि सम्पर्क गर्‍यौं। त्यहाँ पनि सिस्टममा टिकट देखाउँदैन भनिदियो।
यहाँको एयर अरेबियामा सम्पर्क गर्दा उसले पहिलो कुरा त टिकट नै छैन भन्छ। यदि टिकट भएपनि ३५ सय दिराम भन्छ। त्यत्रो पैसा हामीसँग छैन। दुतावासदेखि सबैतिर हामीले भनिसक्यौं तर अहिलेसम्म टिकट पाइने आश्वासन पाइएको छैन।
टिकटका लागि अहिले हामी १८/१९ सय दिराममात्र दिनसक्ने अवस्थामा छौं। यो भन्दा बढी छैन। त्यसमा टिकट पाइंदैन। अब बिरामी मान्छे पनि घर जान नपाइने?
नेपालको ठेगाना:जुनीचाँदे, जाजरकोट
युएईको ठेगाना: रस अल खैमह
सम्पर्क नम्बर: O568824017
कोरोना महामारीमा नोबेल मेडिकल कलेजले कर्मचारीलाई दियो सवा करोड बोनस
डिभी खुल्यो, घरबाटै कसरी भर्ने?
नाथमले नेपालगञ्ज, बिर्तामोड र बर्दीबासमा शाखा खोल्यो
महामारीले लाखौ मजदुर बेरोजगार, के गर्दैछन् ट्रेड युनियनका नेताहरु?
दुई लाख बढी तलब दिने गरी`माई सेकेण्ड टिचर´ले काठमाडौंमा माग्यो १०० शिक्षक
कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि ताहाचलबाट श्रम स्वीकृति रोकियो